DEG-DEG- Xaalad aan wanaagsanayn oo lagasoo sheegayo Libya iyo tahriibayaashii oo la iibsanayo si loo adoonsado. – Puntland News
Home 2017 November 14 Somali News DEG-DEG- Xaalad aan wanaagsanayn oo lagasoo sheegayo Libya iyo tahriibayaashii oo la iibsanayo si loo adoonsado.
DEG-DEG- Xaalad aan wanaagsanayn oo lagasoo sheegayo Libya iyo tahriibayaashii oo la iibsanayo si loo adoonsado.
Waxaa la xaraashaya ma ahan gaari la isticmaalay, ma ahan bugcad dhul ah ama qalabka guryaha la dhigto mana ahan gabi ahaanba alaabta laga ganacsado ee waa 2 qof oo aadamiya. Mid ka mida labada qof ee aan la aqoonsaday wuxuu u dhashay dalka Nigeria wuxuuna u muuqday da’da 20 sano.
Labadaan nin koox ay ka mid ahaayeen waxaa loo bandhigay in laga iibiyo qolyo beeraley ah si ay ugu shaqaystaan.
Markii uu soo baxay muuqaalka filinkaan dadka lagu xaraashayo, ayaa CNN ku u kaba qaatay inuu hubiyo jiritaanka filimkaan wuxuuna u safray wadanka Libya si uu xaaladda u baaro asaga oo isticmaalaya kaamarooyin qarsoor meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Tripoli bishii la soo dhafay.
“Ma jirta cid u baahan dhul qode? Kani waa qoda, waa nin aad u xoog weyn, wuu daloolinaya,” xaraashihii, oo ku labisan dharka qarsoon ee shaqada ayaa yiri. “Maxaan bixiye ahay, maxaan mixiye ahay?”
Markiiba waxaa bilowday in kuwa dadka iibsanaya ay gacmaha taagaan, qiimuhuna marba marka ka danbaysa kor ayuu u kacayey ilaa daqiiqado gudahood uu ka gaaray 650. Way soo gabagabowday ugu danbayntiina raggii waxaa lagu wareejiyey mulkiilayaashoodii cusba.
Gabadha wariyaha ah waxay tiri waxaa hortayda lagu gaday 12 Nigerian ah. Fadlan riix lifaaqa CNN si aad xogta oo dhamaystiran u daawato.